कसैले पाखुरी सुर्किदैमा डराउने नारी हैन म ! - Nepali Nepse
कसैले पाखुरी सुर्किदैमा डराउने नारी हैन म !
१ असार २०७६, आईतवार १२:३९
नजिकिदै गरेको मौद्रिक नीतिलाई सुझाब दिने क्रममा हाम्रो संघले लगानीकर्ताहरुको भावना मुताबिक तयार पारेको १५ वटा बुदाहरु मध्य बुदा नं. १३ मा “त्रास“ भन्ने सव्द्ध छुट्न गएकोमा त्यसैमा टेकेर पूँजी बजारका पण्डित भनाउदाँ ढोगी तथा पाखण्डका बिद्धानका झुण्डहरुले म लगाएत हाम्रो संघ लाई बदनाम गराउन न्वारान देखिको बल निकालेर रोईलो गरेको पाईयो । यस्मा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यहाँ ’षड्यन्त्र गरेर मानविय सद्वभाव भड्काउन’ खोज्नेको कमि रहेनछ । पूँजीबजारको लामो ईतिहासलाई हेर्ने हो भने यस्ता ढोंगी एवं पण्डितहरुको कैयनको संख्यामा अवसान भई सकेको पाईन्छ ।
मैले केहि दिन पहिला इटहरी उप-महानगर पालिकाको मेयर द्वारकालाल चौधरीको अभिब्यत्तिहरु पनि सुनेको थिँए । उनको भनाई मलाई ९०% सत्य लाग्छ । राम्रो काम गर्न खोज्नेलाई यो सतिले सरापेको देश हो भन्दै जहिल्यै भित्तामा पुरियाउनु पर्ने खुईल्याउनु पर्ने ?
याद राख्नु म निस्वार्थ रुपमा पूँजी बजारको दिगो बिकास र लगानिकर्ता हरुको लागि आवाज वुलन्द पारी रहने नारी हुँ । यि ढोंगी पाखण्ड पण्डितहरुको झुण्डले तर्साउन खोज्दैमा तर्सियर भाग्ने नारी हैन म । किनकि मृत्यलाई त पराष्त गरेर आएकी हुँ ! मेरो ९३ बर्षे बाबाले भन्नुहुन्छ “ नानी फलेकै वृक्षमा हान्ने त हुन ढुड:गा “ !
पूँजीबजारको बिकास र बिस्तार लागि सातै प्रदेशमा दुनिया सँग हात पसार्दै हाम्रो संघ नलाग्ने हो भने सामाजिक संजालमा भजन मण्डली गाउँदै हिड्नेले गर्छ ? NPL ले नगरे कस्ले गर्छ ? फिल्डमा आउनु होईन भने यसरी कम्बल ओढेर घिउ नखानु ।
आफूलाई सुसंस्कृत र सुपठित ठान्ने अनि अन्यलाई अज्ञानी, अचेत र असभ्य मान्ने अहंकारका विम्ब हुन् । समाजभित्र रहेको कुनै वर्गले अर्को वर्ग लक्षित हुने गरी सुनियोजित ढंगले लाञ्छना लगाउँदै त्यसलाई पुष्टि गराउन खोज्छ भने त्यो सबैभन्दा नाङ्गो रुप हो ।
हामि नारी ३३% आरक्षणका लागि दुई हात उफ्रेर हिड्ने अनि पुरूषहरूले त यस्ता उपदेश दिए दिए, बिडम्बना महिलाहरूले पनि पुरूषकै हाराहारीमा उभिएर उपदेश दिइरहेका छन् । बल्ल बुझ्दैछु यस्तो थास( उरुङ) बाट बच्दै अगाडी बडेर काम गर्नलाई कति चुनोति रहेछ भन्ने ?
मेलै विनम्रतापुर्वक भन्ने गरेकै छु । म कामलाई उच्च सम्मान गर्छु ! हुन त यस्ताको पछि लागेर बस्ने फुर्सदै नै कहाँ हुन्छ र मलाई तर यस्ता अभिव्यक्ति गाउँका सत्तरी नाघेका हजुरबुबाले यस्ता बिचार राख्या भएँ म उति गहिरिएर लिनन्थेँ पनि होला । र, मलाई जहिले पनि डर निर्धा र निधर्नको होइन, डर त यहाँ शिक्षित र सम्पन्नताको खोल ओड्नेहरुको छ । बजारमा कस्को के कति योगदान छ, सचेत लगानीकर्ताहरुले छुट्टाउनु हुने नै छ ।